I-UP400S - Sonication enamandla yamasampula amakhulu - iHielscher Ultrasound Technology
Amandla angu-400 Watts ultrasonic – I-UP400S (400W, 24kHz) iyisetshenziswa esinamandla futhi esinokwethenjelwa se-ultrasonic sokunikezwa kwe-sampuli emikhulu ebhodini. Uhlelo lokusebenza olujwayelekile lubandakanya: Ukwakhiwa kwe-homogenization, i-deagglomeration, i-lyysis kanye nokwehlukaniswa kwamangqamuzana, isakhiwo seprotheyini kanye nokumiswa kwamanzi.
I-processor ultrasonic UP400S (ama-watts angu-400, i-24kHz) iyisetshenziswa sethu se-laboratory esinamandla kakhulu. Ngama-sonotrode wezinga lobubanzi kusuka ku-3 kuya ku-40mm le divayisi ifanelekile ukuba i-sonication yezinhlobo zesampula kusuka ku-5 kuya ku-4000ml. Ukugeleza cishe. Amalitha angu-10 kuya kwangu-50 ngehora angaboniswa. Ukulungiselela amasampuli i-UP400S isetshenziselwa kakhulu imiqulu emikhulu. Kufanelwe ukuthuthukiswa kwezicelo ze-ultrasonic ebhokisithriyathi kodwa futhi ekusebenziseni kahle kwebhethini kanye nokukhiqizwa kwamanani amancane. Ukuze uthole ukukhiqizwa kwe-PC-control noma isikhombimsebenzisi esikude kuya ekulawuleni okuphakathi kwendawo yomsebenzisi kunconywa ukuze kukhuliswe inqubo yokuphepha nokukhiqiza kabusha. Ukulawulwa kwe-PC kuthuthukisa ukukhiqiza kabusha uma kulandelwa izivumelwano ezithile ze-sonication. Ngamaseli okugeleza okhethekile kanye noxhumo lwamakhomikhali okuxhumane nawo angabuye ahanjiswe emazingeni okushisa aphezulu kanye nezingcindezi.
Le vidiyo ikhombisa i-Hielscher ultrasonicator UP400S (400W) ekhiqiza i-acoustic cavitation emanzini.
I-Ultrasonic Cavitation in Amanzi isebenzisa i-UP400S
Amandla aphezulu enza i-cavitation ejulile edingekayo, kodwa lokhu kubangela umsindo ongafuneki. Ukusebenzisa i-UP400S sincoma ukusebenzisa ibhokisi lokuvikela umsindo.
I-Ultrasonic Processor UP400S
sokusebenza okumeziwe, Ama-watts angu-400, imvamisa ye-ultrasonic 24kHz, uhlelo oluzenzakalelayo lokuhanjiswa kwemvamisa, ukulungiswa kwe-amplitude kusuka ku-20 kuya ku-100%, ukuguqulwa kwe-pulse kusuka ku-0 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, ne-interface ye-DS-9 ye-DSUB, kwimeko ephathekayo, ukuze isetshenziswe nge-stand ST1-16 noma ibhokisi lokuvikela umsindo SB1- 16, ngamathuluzi aphakanyisiwe, i-IP40 ibanga, uphondo lwe-titanium nentambo yesifazane engu-M10x1 ubukhulu (LxWxH): 280x210x150mm, isisindo: 3.2kg
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 3mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yesilisa M10x1, ngamasampuli kusuka ku-5ml kuya ku-200ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 7mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M10x1, ngamasampuli kusuka ku-20ml kuya ku-500mll
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 14mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yesilisa M10x1, ngamasampuli kusuka ku-50ml kuze kufike ku-1000ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 22mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yesilisa M10x1, ngamasampuli kusuka ku-100ml kuze ku-2000ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 22mm, cishe. ubude obuyi-100mm, intambo yesilisa M10x1, ne-seal yezinhlelo ezivaliwe
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 40mm, cishe. ubude obuyi-100mm, intambo yamadoda engu-M10x1, ngamasampula kusuka ku-200ml kuya ku-4000ml
kusuka ku-00: 00 kuya ku-99: 59 (iminithi: isekhondi)
I-Flow Cell D22K
eyenziwe ngensimbi engenalutho, nge-cooling, hose connectors, for fluids, autoclavable, ukusebenza nge sonotrode H22D, ivolumu cishe. 15ml, ene-adapter yokuma ye-stand ST1-16 (ububanzi buka-16mm)
I-Flow Cell GD22K
okwenziwe ngilazi, ngokuzipholisa, ukuxhumeka kwe-hose, oketshezi, okwenziwe ngegazi, ukusebenza nge-sonotrode H22D (noma nge-sonotrode H22L2D ngokuhambisana ne-adapter ye-flask NSA3), ivolumu cishe. 250ml, nge-clamp yokufaka endaweni yokuma, isibonelo isib Stand ST1-16 (ububanzi 16mm)
I-Adapter ye-Flask NSA3
for standard flask-neck, adjustable adjustable, efanelekayo sonotrode H22L2D ngokuhambisana flow flow cell GD22K
I-Sound Protection Box SB1-16
netafula eliguquguqukayo elilinganiselwe nobubanzi be-16mm ibha yokuma, yokusetshenziswa ngamadivaysi UP200S noma UP400S
I-Sonication Beaker BB1-16
i-beaker ye-sonication engacacile yamasampuli, ne-adapter-stand for stand ST1-16 (ububanzi 16mm)
I-Ultrasonicator UP400S nge probe H22 endaweni evulekile yeSB1-16
I-ultrasonic idivayisi ye-UP400S ifinyelela kwimeko ephathekayo.